”Shuqul kuma lihin!” – Dowladda Talyaaniga oo ka jawaabtey eed laga saaray ninkii dadka rayidka ah ku laayey Faransiiska | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Shuqul kuma lihin!” – Dowladda Talyaaniga oo ka jawaabtey eed laga saaray...
(Roma) 31 Okt 2020 – Wasiir Gudeedka Talyaaniga ayaa si wayn uga gilgishey in dalkiisa lagu eedeeyo ninkii Tuniisiyaanka ahaa ee dadka ku laayey kaniisad ku taalla magaalada Nice ee dalka deriska ah ee Faransiiska.
Brahim Aouissaoui, oo ah ninka falkan ku eedaysan ayaa Sebtembar kasoo degey jasiiradda reer Talyaani ee Lampedusa isagoo 2 todobaad oo karaantiil ahaa kaddib loo wareejiyey magaalada Bari iyadoo horraantii Oktoobar loo qabtay inuu 7 maalmood Talyaaniga uga boxo.
Kaddib weerarka, siyaasiga midigta fog ee Matteo Salvini, oo ah hoggaanka Xisbiga Lega Nord ayaa Wasiiradda Gudaha Luciana Lamorgese, ku eedeeyey inay ku guul darraysatey celinta dadka ka imanaya Afrika, isagoo xitaa dusha ka saaray dadka lagu diley weerarkii Faransiiska wuxuu kaloo ka codsaday inay is casisho.
Iyada oo dhaliisha ka fal celinaysa, waxay Lamorgese ku doodday in Aouissaoui aan dhanka Tuniisiya looga arkaynin nin halis noqon kara, isla markaana aanay wax astaamo ah aysan ku arkin sirdoonka.
“Weerarkani waa mid ku dhacay Yurub. Wax mas’uul ah kama nihin,” ayay isku difaacdey.
Tuniisiya oo wajahaysa xaalad dhaqaale oo adag ayaa kusoo jabtay Talyaaniga oo ay sanadkan soo gaareen 27,000 tahriibe, kuwaasoo ay Tuniisiya kaligeed ka tahay 11,195 oo qof, waxayna noqonaysaa dalka ugu badan ee kaligii ku leh wax ka badan 1/3.
Previous articleRiyaal cusub oo uu Sucuudigu daabacay oo ka caraysiisay dalka Hindiya & ashtako loo gudbiyey + Sababta
Next articleTOOS u daawo: Burnley vs Chelsea, FC Koln vs Bayern Munich, Crotone vs Atalanta – LIVE (Shaxda Sugan)